Ukunakekelwa kwama-Orchids - kunye nalezi ngcebiso eziza kukhula
Ukunyamekelwa kwama-Orchids - Indlela yokukhulisa ii-Orchids zabo | Indlu ye zityalo
Ukunyuka kwama-orchids kungakhuthazwa njani?
Iimpembelelo eziqhelekileyo ekunyamekeleni i-orchids
I-orchids okanye i-Orchidaceae kuthiwa ithandwa kakhulu kwaye isasazeka emhlabeni jikelele.
Ukunakekelwa kwee orchids ezifanelekileyo
Ama-Orchids asemva kwintsapho ekhohlakeleyo, oko kuthiwa yi-Asteraceae, iqela lesibini elikhulu kunazo zonke kwizityalo ze-bedecktsamigen.
Ukunakekelwa kwe-orchids efanelekileyo
Zijongwa njengelungileyo. Ngenxa yalesi sizathu, i-orchid yindlovukazi phakathi kwezityalo ezininzi zamathande zintyatyambo.
Uhlobo lwe-orchid lukhulu. Iyonke iyonke ifikelele kwiifama ezivunyiweyo ze-30.000. Esi sibhalo esilandelayo sichaza ezinye iingcebiso kunye neendlela zokunyamekela nokuphathwa kakuhle kwama-orchids. Ikwaxubusha nokuba yiziphi iimpazamo ze-orchid ezenza rhoqo.
Ngokuyinqobo, i-orchid ilula kakhulu ukusebenzisa izityalo ezingenakunzima.
Nangona kunjalo, kukho impazamo embalwa engenziwa kwi-orchid ukunakekelwa. Ngoko ukuba oku kungenzeki kwaye i-orchids ivakale kakuhle, umbhalo olandelayo unika ulwazi malunga nendlela yokwenza okulungileyo.
Ukukhula kwe-orchid kunokukhuthazwa ngokufanelekileyo kunye neemeko zesakhelo esifanelekileyo. Oku kubandakanya ukuthengwa kwebhodlela yezityalo ezifanele i-orchid. Apha, ubukhulu bombho bubalulekile. Nceda qinisekisa ukuba ibhodlo le-orchid yakho libukhulu obufanelekileyo esifanelekileyo kwisityalo.
Oku kuthetha ukuba ibhodlo le-orchid akufanele libe likhulu. Imvelaphi yale nto kukuba ibhokhwe yezityalo ze-orchid inika ukuzinza. Nangona kunjalo, kumbindi omkhulu kakhulu le njongo ayikwazi ukuzaliseka. Kwimeko embi kakhulu, i-orchid ayixhaswa ngokufanelekileyo ngenxa yebhodi elikhulu. Nangona kunjalo, oku kuyimfuneko ukuze intyatyambo ingakhula ngokufanelekileyo. Kule meko, indawo engakumbi isho ukukhula okungakumbi, kodwa okuchaseneyo. Kulimaza isityalo ukuba uthenge kakhulu ibhodwe.
Ngokuqhelekileyo, le mpazamo yenziwe kwaye ichaneke ngokuqinisekileyo kukuba isityalo sisakhula kwaye oku sele kulungiselelwe ekuqaleni. Nangona kunjalo, oku kuya kunika isityalo sakho isakhelo esibalulekileyo sokukhula. I-orchid engenayo ukuzinza kwigumbi layo ayiyi kukhula kakuhle. Ngoko ke, nceda ufikelele ebhodweni elincinci. Ngaloo ndlela ke iingcambu ze-orchid zifumana ithuba lokuzinzisa ngokufanelekileyo.
Ukongezelela, iibhobho ezincinci zifanelekile ngokubhekiselele kumanzi okuza kuthululwa. Kulo nqaku, kufuneka kuqatshelwe ukuba i-orchids ayithandi imitha enkulu yamanzi. Ngako oko kuyilungele ukuba ibhokhwe encinci apho utshala khona i-orchid yakho kwaye uhlala umanzi ngamanzi amaninzi. Ngoko unako ukuzigcina uyingxaki eziya kudibana nebhodi enkulu.
Ngokomzekelo, enye yeengxaki kukuba xa umlinganiselo wamanzi uphakamileyo, i-orchid ayikwazi ukufumana ngokupheleleyo amanzi. Amanzi agijimela kwisityalo. Ngenxa yoko, izimpande zityalo zisoloko zimanzi. Ukuba le meko ayitholakali ngexesha, isityalo siyagula. Oku kubonakaliswa kwinto yokuba iingcambu zibola. Le meko ibaluleke kakhulu kwi-orchid. Ngeli xesha, akakwazi ukubonelela izondlo eziyimfuneko. Ukuba le meko ayibonakalwanga, isityalo singafa. Oku kufuneka kugwenywe kuzo zonke iindleko. Nceda uhlale uqinisekisa ukuba akukho manzi ebhodweni.
Isityalo sithululelwa phezu kwamanzi amaninzi
Njengazo naziphi na ezinye izityalo, i-orchids idinga amanzi ukuze iphile. Nangona kunjalo, kuba ama-orchids anamaqabunga awanako ukuhambisa amanzi amaninzi ngenxa yeepropati zawo ezithile, ixabiso elifanelekileyo liyimfuneko.
Ndiyinyamekela njani i-orchids yam kwientyatyambo?
Emva kokuba iingcambu zibuyiselwe ngokupheleleyo, amanzi aseleyo kufuneka asuswe. Ngaphandle koko, isityalo sisongela ukufa. Ngoko ke, umngcipheko wesityalo esithandwayo umkhulu kakhulu kunomngcipheko wesityalo esomayo. Ngenxa yeempawu zalo, i-orchid ingaphila kakuhle ngaphandle kwamanzi ixesha elide. Ukulungiswa okulungileyo ngoko ke i-alpha kunye ne-omega ye-orchid ukunakekelwa.
I-2) I-orchid ayiyiyo izuba-ilanga elithe ngqo
Ngokungafani nezinye izityalo, i-orchid ithanda ilanga, kodwa kuphela ngokumodareyitha. Ii-orchids ezide kakhulu elangeni, zithintela ngokufumana amabala amnyama. Oku akubukeka kakuhle kwaye isityalo siziva singakhululeki. Kule meko kufuneka ukhangele indawo entsha, ye-shadier yeentyatyambo. Ukukhanya okuninzi kunceda i-orchid, kodwa akukho lushiso elanga ngqo.
I-3) Umoya ongcolileyo - kungekhona ukufudumala ebusika
Umoya ekamelweni akufanele ube ngumile kakhulu, kuba le nto ayithandi i-orchid. Ukhetha umoya ofudumele nolushushu. Ukuvelisa umsila, umzekelo, isityalo sinokufuthwa ngamanzi. Nangona kunjalo, oku kuphela umlinganiselo wexesha elifutshane. Omnye ubeka ukushisa kwisitshalo ebusika ngokubeka phezu kwe-radiator. Kodwa nje lo moya ofudumalayo uwonakalisa i-orchid, kuba iyanciphisa ubuncwane obuninzi obufunekayo.
I-4) Iseluleko xa ukusika - iingcambu zomhlaba zibalulekile kwi-orchids
Enye inkcazo yokukhathalela ibandakanye iingcambu ezithatha ngaphandle kwebhodeni. Oku akuhle ukujonga. Nangona kunjalo, iingcambu zengxowankulu zibalulekile kwi-orchid. Ziyiziko lezityalo kwaye ngoko ke lijongene nokubonelelwa kwezondlo. Kukho okunye okungafaniyo: ukuba iingcambu zibolile okanye zifile ziyakuthi zisuswe.
5) Isilinganisi esifanelekileyo sesichumiso
I-orchid inexabiso elincinci lezondlo. Isigaba sesityalo sesityalo sisuka ngo-Ephreli ukuya kuSeptemba. Kuphela ngeli xesha isityalo kufuneka sitshatswe ngokuphindwe kabini ngenyanga. Emva kokuba ukuchumisa akusekho mfuneko kwaye kufuneka ngokoke.
6) Musa ukutshintsha iqondo lokushisa kakhulu
I-orchid ithanda umkhuba. Oku kusebenza nokuphakama kwamaqondo okushisa. Ukuba iqondo lokushisa liguquka kwigumbi apho i-orchid ihlala khona, ayisayikuva kakuhle kwaye iyeka ukukhawuleza. Ukuthintela oku, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba iqondo lokushisa likamgangatho lilingana nalo lonke unyaka.
Ukubala imibala yama-orchids kubantu abadala